အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: စစ်မခင်း ချစ်ခြင်း နဲ့ နေချင်တဲ့ ဘာသာ
စစ်မခင်း ချစ်ခြင်း နဲ့ နေချင်တဲ့ ဘာသာ
ဗုဒ္ဓဘာသာသည် အကြမ်းဖက် မဟုတ် ဘယ်သူ့ မှိုဘယ်သူတွေဘယ်လို အပုပ်ချစော်ကားပါစေ ကျနော်တို့ လုံးဝလက် မခံပါ.
ကမ္ဘာကျော် TIME မဂ္ဂဇင်းမှာ ခေါင်းစဉ်နဲ့ စွပ်စွဲ ရေးသား ထားချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အံ့သြမိတယ်ဘာသာရေးကို တပ်ပြီးပြောတာက မလုပ်သင့်တဲ့ ကိစ္စပါ။ကြိုက်ခြင်း၊ မကြိုက်ခြင်းကတော့ တစ်ပိုင်းပါ။ ဒီလိုဖော်ပြတဲ့ အတွက် နိုင်ငံနဲ့ ဘာသာရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ ဒီကိစ္စဟာ သွေးရိုး သားရိုး မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဗုဒ္ဓ၀ါဒသည် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ခန္တီတရားတို့ကို လက်ကိုင်ထားမှုအတွက် ကျော်ကြားသည့် ယုံကြည်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်သည်။ရဟန်းသံဃာများရဲ့ လက်နက်ဟာ သည်းခံခြင်းဆိုတဲ့ ခန္တီတရားသာ ဖြစ်ပါတယ်။သမိုင်း အစဉ်အလာအရ ဗုဒ္ဓဘာသာဟြာ ငိမ်းချမ်းမှု ရှိခဲ့တယ်။ ရဟန်းသံဃာတော်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ ပရိယတ္တိ၊ ပဋိပတ္တိကိုသာ အများစုက ဇောက်ချလုပ်တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အမြဲတမ်း ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဘာသာအဖြစ် ရှိနေမှာပါ''''ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကမ္ဘာကျော် သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး အိုင်းစတိုင်းက ပြောခဲ့တယ်။ ခုခေတ် ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ ဘာသာတရား တစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင် အဲဒီဘာသာသည် ဗုဒ္ဓဘာသာပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ ဒါဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘာသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း အထူးပြောစရာ မလိုတော့ဘူး။The Face of Buddhist Terror ဟု စာတမ်းရေးထိုး ထားပါသည်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အားလုံးကို စော်ကားသည်ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ဒီကိစ္စကို သဘောမတူပါဘူး။ဒီကိစ္စဟာလူတွေကြားထဲမှာ ပဋိပက္ခဆိုတာက.
ဗုဒ္ဓကို စော်ကားသည်သဘော အနေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အားလုံးကို စော်ကားသည် ပေါ်လာတာကတော့ မကောင်းဘူး။.
အမိမြေအရေး ရှုတ်ရှက်ခတ်နေတယ်...အဲလိုဖြစ်အောင်လဲ အကွက်ကျကျ ထုံးစံအတိုင်း မြေခွေးကြံကြံခဲ့ကြတယ် ...ဘယ်သူလဲမမေးနဲ့ စည်းစိမ် အာဏာ လက်မလွှတ်နိုင်တဲ့ စစ်ဘီလူးတွေပဲ ...လူမျိုးရေး ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အမြင်တွေနဲ့ ပါ ခုတုန်းလုပ် ပြည်သူအကြားသွေးကွဲမှုတွေဖြစ်လာအောင် အချက်ကျကျ ဖန်တီးခဲ့တယ်...
ပြောသာပြောနေရတာ။ မနေနိုင်လို။ စိတ်ညစ်ငြူးတယ်။ စိတ်ကျက်သရေတုံးတယ်။ အတိုက်အခံများဘက်မှ ပြည်သူများဘက်မှ ဖြစ်နိုင်သမျှ ငြိမ်းချမ်းသည့်လမ်း၊ ပြေလည်သင့်မြတ်ရေးလမ်း၊ သွေးထွက်သံယိုမှု အနည်းဆုံးလမ်းကိုသာ ရွေးချယ်လိုကြပါသည်။ ရွေးလည်းရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ သို့သော်လည်း ဤသည်မှာဆန္ဒအဖြစ်သာ ဖေါ်ပြခွင့်ရခဲ့ပြီး၊ တကယ့်လက်တွေ့ဘဝတွင် အတိုက်အခံများ/ပြည်သူများ လျှောက်လှမ်းရမည့်လမ်းကို အုပ်စိုးသူများဘက်ကသာ တစ်ဖက်သတ် ပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။သွေးပေါင်းများစွာအာဇာနည်ပေါင်း ရာထောင် စွန့် ပြီး တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။.
ဘယ်သူ့ မှ တာဝန်မယူသလို့ ခေါင်းဆောင်ကြီးများမိန့် ခွန်းတွေမှာ ဗွက်ပေါက်အောင် ရေးသားပြောဆိုကြပြီး ပြည်သူများ၏ လည်ပင်းစွပ်မိနေပြီ~~ဗမာပြည်သားတွေ ဗမာပြည်မှာ အခြေအနေမပေးတော့ ကမ္ဘာပါတ်ပြေးရတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒုက္ခသည်များဘဝပါ...ခလေးတွေရဲ့ ပညာရေးနဲ့ ဘ၀တိုးတက်ရေးမပြောနဲ.အစားအသောက်မမှန်နဲ့ ပိန်လိန်နေတဲ့ ရုပ်တွေဖြစ်လို့ ဗျာ။.
အမြဲခံနေရတဲ နိုင်ငံတော်ကို၊ ပြည်သူကိုဒုက္ခဖြစ်အောင်ဖန်တီးတတ်တာ၊မင်းဆိုးမင်းညစ် စစ်သားလူထွက် အစိုးရ i လွှတ်တော် i အာဏာရှိရင်လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လို့ ရတယ်ဆိုတဲ့ ဥပဒေတွေ ......
သံဃာတော်တွေက မနေနိုင်လို. လူတွေကြားထဲမှာ ပြည်သူများဘက်မှ ဖြစ်နိုင်သမျှ ငြိမ်းချမ်းသည့်လမ်း၊ ပြေလည်သင့်မြတ်ရေးလမ်း၊ သွေးထွက်သံယိုမှု အနည်းဆုံးလမ်းကိုသာ ရွေးချယ်လိုကြပါသည်။ ရွေးလည်းရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ နဲ့ ဘုန်းကြီး တွေ အကြမ်းဖက် ဖြစ် အပုပ်ချစော်ကား ခံ ရတယ်.......အုပ်စိုးသူများဘက်က ဥပဒေတွေ အနေနဲ့ ဒုက္ခဖြစ်အောင် ဖန်တီးခဲ့တယ်.....
မင်းတို့တွပြောပြောနေကြတဲ့ ဥပဒေဆိုတာဘာလဲ...လိမ်ဖို့လာ...ခိုဖို့လာ မီးရို့ဖို့လာ.. မဒိန်ကျင့်ဖို့လာ...အရက်ဆိုင် ဘီရာဆိုင်ဖွင်ဖို့လာ..ဘာလဲ...ဥပဒေ ဆိုတာ....ပြောလိုက်ရင်တော့ ဥပဒေ လုပ်လိုက်တာက ကလိမ်က ကျစ်..ရှောက်ရှက်ကိုမရှိကြဘူ...အဲဒါလာ..မြန်မာ့သွေးက မဟုတ်တော့ဘူ.... မျိုးမစစ်တွေရဲ့ မထိုက်တန်သူဆိုတာ လွင့်မျောရမှာပါပဲ…”.
တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့လောက်ပဲစဉ်းစားနေကြတာ မျိုးချစ်စိတ်မရှိဘူးတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုပြန်မကြည့်ချင်ကြဘူးပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုမလေးစားကြ့ လုံးဝလက် မခံပါ....မိစ္ဆာတွေဝိုင်း အနေရိုင်းတဲ့ လူတွေဟာ အသေဆိုးနဲ့ မကြာမှာ..ှ သေတော့မှာပါ.....
ကျနော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာတော်သည်ကား
ကျနော်တို့ ယုံကြည် ကိုးကွယ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ တရားတော်တွေမှာ
တစ်ဦးအပေါ် တစ်ဦး မေတ္တာစိတ်ပွားများရန်လည်း သင်ကြားပါတယ်။
ကျနော်တို့ ယုံကြည် ကိုးကွယ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ တရားတော်တွေဟာ
နိုင်ငံခြင်း စစ်ခင်းမည့်အရေးကိုပင် ငြိမ်းအေးစေခဲ့ပါတယ် . . ။
အကြမ်းဖက်ခြင်းကို လုံးဝ တားဆီးရုံမျှမက
ဆင်းရဲလိုခြင်းအချင်အချင်း ကင်းရှင်းရန် ဆိုဆုံးမပါတယ် . .။
အာဏာရှင် စိတ်ဓါတ်နဲ့။ ခုကတနိုင်ငံလုံးပုံရိပ်နဲ့အမျိုးသားဂုဏ်သိက္ခာဆိုတဲ့ ကိုတိုက်ရိုက်ထိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့က လူကြိုက်အောင်လုပ်နေကြတာ မဟုတ်ဘူး။ မြေပေါ်မြေအောက် သယံဇာတ ကြွယ်ဝသောနိုင်ငံ
ဒီလိုမဟုတ်မဟတ်ကို စိတ်ထင်ရာတွေ လျှောက်လုပ်ကြေမယ်ဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးဟာ မကြာမီ ပျက်စီးပြိုကွဲပြီး ကျွန်သဘောက်ဖြစ်သွားကြမှာဘဲ။
Golden land မြန်မာ
ရွှေရောင်မဟုတ်ဘဲ တာပေါ်လင်အပြာတွေ မိုးထားသော ဒုက္ခသည်စခန်း အများအပြားရှိသောနိုင်ငံ။
ခင်များတို့လုပ်တတ်တာ ဘာရှိလဲ.....လူမဆန်တဲ့ သူတွေ ......ထွီ
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 9:54 PM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook